Panasonic ကကြှေးမှေး, INSERT စက်တိပ်ကြှေးမှေးယူနစ်, တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ မှစ. တိပ်ကြှေးမှေးယူနစ်ကိုဆက်ကပ်
ဖေါ်ပြချက်:Panasonic ကကြှေးမှေး,insertion စက်တိပ်ကြှေးမှေးယူနစ်,တိပ်ကြှေးမှေးယူနစ်,လမ်းခွဲ Panasonic က,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Panasonic ကကြှေးမှေး
Panasonic က nozzle
Panasonic ကကြှေးမှေး ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Panasonic ကကြှေးမှေး, insertion စက်တိပ်ကြှေးမှေးယူနစ် ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, တိပ်ကြှေးမှေးယူနစ် R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
N610071920AA Panasonic က AI ကို RL131 RL132 RG131 လမ်းခွဲ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic CM402 CM602 NPM 12 / 16MM FEEDER KXFW1KS6A00  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
X01A38000 Panasonic က AI အလမ်းခွဲ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic ကလမ်းခွဲ 1046932000 1020732000AB 1020732000AC  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က CM402 CM602 NPM 24 / 32MM လမ်းခွဲ KXFW1KS7A00  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က CM402 CM602 NPM 88MM လမ်းခွဲ KXFW1L10A00  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
1046933000 Panasonic က AI အလမ်းခွဲ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
N610071920AA Panasonic က AI အတိပ်လမ်းခွဲ UNIT  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ထုပ်ပိုး: မြှုပ် + ပုံး
N610071920AA Panasonic က AI ကို RL131 RL132 RG131 လမ်းခွဲ အပိုင်းနံပါတ်: N610071920AA X02P58000 ပစ္စည်းအမည်: RL131 RL132 RG131 လမ်းခွဲ အခြေအနေ - အသစ်စက်စက် အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic စက် RL131 RL132 RG131 Shenzhen Keith Electronic Equipment Co, Ltd...
Panasonic CM402 CM602 NPM 12 / 16MM FEEDER KXFW1KS6A00 အပိုင်းနံပါတ် - KXFW1KS6A00 ပစ္စည်းအမည်: လမ်းခွဲ အခြေအနေ: မူရင်းအသစ် အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic စက် CM402 CM602 NPM အောက်ပါ SMT အပိုပစ္စည်းများ၏မူရင်းနှင့်အသစ်များကိုဤကုမ္ပဏီတွင်ရောင်းချနိုင်သည်။...
X01A38000 Panasonic က AI အလမ်းခွဲ အပိုင်းအရေအတွက်: X01A38000 item အမည်: လမ်းခွဲ 12.7mm အခြေအနေ: မူရင်းနယူး ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Panasonic ကစက် RHS, RHS2B Baoan ခရိုင်, ရှန်ကျန်းမှာတည်ရှိပါတယ်ရှန်ကျန်း Keith အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်း Co. , Ltd "။...
နေရာချထားစက်၌, လမ်းခွဲ၏အခန်းကဏ္ဍကိုနေရာချထားစက်အတွက်သွန်သင်ချက်၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အားယူထားသောအရာတိကျမှုနှင့်အဆင်ပြေပစ်ကပ်များအတွက်ပုံမှန်ပုံစံနှင့်အမိန့်အတွက်နေရာချထားခေါင်းကိုဖို့ chip ကိုအစိတ်အပိုင်း SMC / SMD ထောက်ပံ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။...
အဆိုပါခါးပတ်လမ်းခွဲနေရာချထားစက်၏လမ်းခွဲအတွက်အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ အစဉ်အလာဖွဲ့စည်းမှုအမျိုးအစား, pneumatic အမျိုးအစားနှင့် Multi-စေးလျှပ်စစ်အမျိုးအစားခြေသည်း, ဘီးတပ်ယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ Panasonic က CM402 CM602 NPM 88MM လမ်းခွဲ KXFW1L10A00...
နေရာချထား machine ပေါ်တွင်ကြှေးမှေးကဘာလဲ? လမ်းခွဲတဲ့လမ်းခွဲသို့မဟုတ်လမ်းခွဲအဖြစ်ဘာသာပြန်ထားသောသောသူတို့ကိုကြှေးမှေး၏ Transliteration ဖြစ်ပါသည်, နှင့်နေရာချထားစက်၏အဓိကဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ function ကိုလမ်းခွဲပေါ်တွင် SMD patch...
နေရာချထားစက်များတွင်ပြွန်လမ်းခွဲ၏ဖြစ်ရပ်မှာတုန်ခါလမ်းခွဲအဓိကအားဖြင့်ပြွန်အတွင်းအစိတ်အပိုင်းများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဦးခေါင်း၏ Pick အနေအထားကိုထည့်သွင်းလျက်, PLCC နှင့် SOIC ဒီလမ်းအတွက်အစာကျွေးကြသည်သေချာစေရန်အသုံးပြုသည်။ N610071920AA Panasonic က AI...
တရုတ်နိုင်ငံ Panasonic ကကြှေးမှေး ပေးသွင်း
နေရာချထား machine ပေါ်တွင်ကြှေးမှေးကဘာလဲ? Feida နေရာချထားစက်ပေါ်ကဘာလဲ? Feida နေရာချထားစက်၏အဓိကဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ function ကိုလမ်းခွဲပေါ်တွင် SMD patch ကိုအစိတ်အပိုင်းများကို mount ရန်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်လမ်းခွဲ patch များအတွက်နေရာချထားစက်များအတွက်အစိတ်အပိုင်းများကိုပေးပါသည်။
နေရာချထားစက်၌, လမ်းခွဲလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနေရာချထားစက်အတွက်ကြီးမားတဲ့နံပါတ်နှင့်အနေအထားကိုယူထားသောအရာတိကျမှုနှင့်အဆင်ပြေပစ်ကပ်များအတွက်ပုံမှန်ပုံစံနှင့်အမိန့်အတွက်နေရာချထားခေါင်းကိုဖို့ chip ကိုအစိတ်အပိုင်း SMC / SMD ထောက်ပံ့ဖို့။ ဒါဟာအစတစ်နေရာချထားစက်ရွေးချယ်ရာတွင်နှင့်နေရာချထားမှုလုပ်ငန်းစဉ်စီစဉ်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ SMC / SMD အထုပ်ပေါ် မူတည်. လမ်းခွဲပုံမှန်အားတိပ်ခွေ, ချောင်းတွေ, waffles နှင့်အမြောက်အများပစ္စည်းများအမျိုးမျိုးရှိသည်။
ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို 8 မီလီမီတာ, 16mm, 24mm, 32mm, 44mm, 56mm အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားနှင့်အတူတိပ်လမ်းခွဲ
Panasonic ကကြှေးမှေး insertion စက်တိပ်ကြှေးမှေးယူနစ် တိပ်ကြှေးမှေးယူနစ် လမ်းခွဲ Panasonic က Panasonic ကခြေသည်း PALLET